‘नर्मल डेलिभरी’ चाहनेले ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुरा – खबर डट टिके
खबर डट टिके
‘नर्मल डेलिभरी’ चाहनेले ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुरा
20th March 2017 20th March 2017 admin0Comment
१. तनाबबाट टाढै रहनुहोस् :तनाब बढ्नु गर्भवती महिलाका लागि राम्रो होइन् । किनकी चिन्तित मात्रै तुल्याउदैन कि गर्भवती अवस्थालाई जटिल बनाउन समेत मद्धत गर्छ । खासगरी तनावले गर्भवती महिलाको मात्रै नभई पेटमा हुर्कदै गरेको बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत असर गर्छ । त्यसैले यति तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ र तनाव महसुस भइरहेको छ भने तत्काल चिकित्सकको परामर्स लिनु हितकर हुनेछ ।
२. नियमित रुपले व्यायम गर्नुहोस् :
हुन त गर्भवती अवस्थामा महिलालाई आरामको एकदमै जरुरी छ भनेर भन्ने गरिन्छ । तर त्यो संग थोरै थोरै कसरतको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । कसरतले गर्भवती महिलालाई चुस्त बनाउछ भने दुखाई सहने क्षमता समेत बढाउछ । कसरतले जाँघको मासंपेशी मजबुत बनाउछ जो सुत्केरी हुने बेलामा दुखाईसंग लड्न तपाईँको मद्धत गर्छ । तथापी गर्भवस्थामा गरिने कसरले तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्छ । तर कसरत गर्दा व्यायम प्रशिक्षक तपाईँको साथमा रहन जरुरी छ । कहिलेकाही गर्भावस्तामा गरिने सामान्य गल्तीले तपाईँको ज्यान खतरामा पर्न सक्छ ।
३. खानपानमा ध्यान दिनुहोस :
सामान्य रुपमा सहज सुत्केरी हुनका लागि गर्भअवस्थाका बेलाको खानपानमा पनि निर्भर हुन्छ । गर्भअवस्थाका बेला कतिपय महिलाहरु कमजोर हुन्छन् । त्यसका लागि चिकित्सकले आवश्यक औषधि पनि दिन्छन् । यदि तपाई सामान्य रुपमा सुत्केरी हुन चाहनुहुन्छ भने समयमै खाने र सही आहार खाने गर्नुपर्छ । खानामा हरियो सागसव्जी अण्डा दूध, फलफुल माछा मासु खानु राम्रो हुन्छ । साथै आवश्यक मात्रामा पानी समेत पिउनु राम्रो हुन्छ ।
४. प्रशस्त पानी पिउनुहोस् :
पानी तपाईँको लागि शरीरलाई स्फुर्ती गर्न मात्रै होइन कि सामान्य सुत्केरी बनाउन पनि मद्धत गर्छ । गर्भअवस्थाको बेलामा जति सकिन्छ पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । नुहाउनका लागि तातो पानी प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ । तातो पानीले तपाईलाई गर्भअवस्थाका बेला हुने दुखाईबाट लड्नसक्ने शक्ति दिन्छ ।
५.धूमपान मध्यपानको सेवन नगर्नुहोस् :
धूमपान र मध्यपानले गर्भवती महिला र पेटमा हुर्कदै गरेको शिशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्छ । यसले रगतमा हुने आइरनको नास गरिदिन्छ ।आइरनको कमीले गर्दा कतिपय अवस्थामा गर्भवती महिलाहरु शारीरिक रुपमा कमजोर हुन सक्छन भने यसको असर बच्चाको विकास तथा उसको तौलमा समेत पर्नसक्छ । र यी सबैको असरका कारण सामान्य सुत्केरी हुन कठिनाई हुन्छ ।
खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो,डिजेल,पेट्रोलको मूल्य भने यथावत →
२०७४ तीजको चहलपहल …
ओली सरकारमा भएको चिनसंगको इन्धन सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने
वैदेशिक रोजगारी छोडेर व्यावसायिक माछापालन